स्वस्तिमालाई खतरा ! – Khabar Silo
स्वस्तिमालाई खतरा !
काठमाडौं । ‘बुलबुल’मा गरेको अभिनयले स्वस्तिमा खड्कालाई रातारात चर्चीत बनायो । सानातिना भूमिकामा अल्झिरहेकी उनको करिअरमा यो फिल्म टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो ।
अहिले धेरैले उनलाई नम्बर वान अभिनेत्रीको दाबेदार मान्छन् । तर, स्वस्तिमाले यो उचाई हासिल गर्न सफल फिल्मको सङ्ख्या निरन्तर थप्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालका लागि खतरा के छ भने स्वस्तिमालाई यो सङ्ख्या पाउन सजिलो छैन ।
‘बुलबुल’ पछि रिलिज भएको ‘हजार जुनीसम्म’ले बक्स अफिसमा घुँडा टेकेपछि उनको स्पीडमा राम्रै ब्रेक लागेको छ । यसैबीच स्वस्तिमाको नयाँ फिल्म ‘घामड शेरे’ रिलिजको सँघारमा छ तर यसका पनि लक्षण ठीक छैनन् ।
एक फिल्मको ट्रेलर नै १० दिनअघि मात्र रिलिज भएको छ, त्यसमाथि सुस्त प्रचारप्रसार । अझ त्यसमाथि त्यो फिल्मको विषयवस्तु पनि पूर्ण व्यावसायिक देखिएको छैन ।
यस्तोमा कथंकाल यो फिल्मले पनि ‘हजार जुनीसम्म’कै बाटो समात्यो भने स्वस्तिमालाई राम्रै झट्का लाग्ने निश्चित छ ।
१०८ बर्षिय बुढि आमा ,एकदमै मजाक अनि मीठो गित गाउनुहुन्छ ,घरायसि सबै काम गर्नुहुन्छ ,सबैले आशिर्वाद लियौ (हेर्नुस् भिडियो )
Posted on May 3, 2021 Author khabar silo
गुल्मि फार्से जहाँ एकजना १०८ बर्षिय बुढि आमा बस्नुहुन्छ ।उहाको घरमा पुग्दै गर्दा पुरानो घर आगनभरि कुखुरा अनि दलानमा बुढि आमा सुतिरहेको अवस्थामा हामिले उहालाई भेट्यौ ।घरमा अरु कोहि पनि नदेखेपछि हामिले आमालाई बोलायौ । चाउरिएर मुजा परेका गालाहरु कानमा मढ्यौरि नाकमा बुलाकि र फुलि र सेतै फुलेको कपाल ,साचै आमा अब चहि बुढिहुनुभएछ कान […]
Posted on December 23, 2020 Author khabar silo
एजेन्सी । बलिउडका दबंग खान सलमान खानले आफ्नो एक्स गर्लफ्रेन्डद्धए एश्वर्य र कट्रिनाको बारेमा सार्वजनिक ठाउँमै गरे आफुसंग सम्बन्ध रहंदा भएको कृयाकलापहरु सार्वजनिक । उनले यी दुई प्रेमीकाहरु आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्वपुर्ण पात्रका रुपमा रहेको बताउँदै जब यी दुईसंग आफु प्रेममा रहंदा गरिएको कुराहरु सुनाए तब सुन्ने सबै एकअर्कालाई हेरेको हेरै भए । सलमानले आफ्नो […]
नेताको दवाव पछि हटाइएको पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट’ फेरि युट्युवमा (भिडिओ हेर्नुस्)
काठमाडौ । गायक पशुपति शर्माको एउटा गीत निकै चर्चित छ । ‘लुट्न सके लुट’ फेरि युट्युवमा आएपछि राजनीतिक दबाब आयो । उनले दवाव थेग्न नसकेपछि त्यो गीत हटाएका थिए । परिमार्जन सहित सार्वजनिक गर्ने भनेर हटाएका पशुपतिले फेरी त्यो गीत फेरी युट्युबमा अपलोड गरेका छन् । अब पशुपति शर्माको चर्चित गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ […]
विहेका लागि प्रभाषसँग ६,००० प्रपोजल्स !
चुस्त–तन्दुरुस्त अभिनेत्री दिशा पटानी